FORCE2019: Abuuritaanka aragti wadaag ah oo loogu talo galay diyaarinta - AfricArXiv
Published by Jo Havemann on 18th Diisembar 2019 18th Diisembar 2019
Bartan ayaa laga soo dhejiyay ASAPbio oo dib loo adeegsaday CC-BY 4.0 liisanka. Fadlan ku dar wax faallooyin ah iyo faahfaahinno ah boostada asalka ah ee asapbio.org/force2019-preprints-vision-dinner.
Ka dib wada hadal guddi ah oo ku saabsan “Kumaa saameyn ku yeelan doona guulaha hore ee diyaarinta cilmiga barashada cilmiga bayoolajiga iyo ilaa dhamaadka?” At FORCE2019 (soo koobay halkan), waxaan sii wadnay wada hadalada casho ee aan la yeelanay daaweeyeyaasha iyo qeybaha kale ee bulshada:
Emmy Tsang (isuduwaha), eLife
Theo Bloom, BMJ iyo medRxiv
Andrea Chiarelli, La-tashiga Cilmi-baarista
Amye Kenall, Guga Springer
Fiona Murphy, lataliyaha madaxbanaan
Michael Parkin, Yurub PMC, EMBL-EBI
Naomi Penfold (isuduwaha), ASAPbio
Juan Pablo Alperin, Mashruuca Aqoonta ee ScholCommLab / Publick
Humberto Debat, Machadka Qaranka ee Teknolojiyada Beeraha (Argentina)
Jo Havemann, AfricanArXiv
Maria Levchenko, Yurub PMC, EMBL-EBI
Lucia Loffreda, La-tashiga Cilmi-baarista
Claire Rawlinson, BMJ iyo medRxiv
Si wax looga qabto arrimaha adag ee koox ahaan leh aragtiyo kaladuwan, waxaan ka wada hadalnay shan bayaan oo dadka ku saabsan sida loo diyaariyo ama laga yaabo inaysan u shaqeynin. Miiska Emmy ayaa looga hadlay:
Heerka baaritaanka hubinta tifaftiraha iyo / ama dib u eegista asaxaabkiisa ee la soo saaray waa in si cad loogula socodsiiyaa meesha laga galayo soo diyaarinta
Had iyo jeer waa inay xor u ahaataa qoraa inuu soo dhejiyo qoraalka
Saadaasha looma isticmaali karo in lagu aasaaso mudnaanta daahfurka
Adeegsadayaashu waa inay ahaadaan kuwo aan dhammaystirnayn aaladda kor iyo hoosba
Dhanka kale miiska Naadiga Naomi (kor ku sawiran) waxaa looga wada hadlay “aasaaska wargeysyada waa in aysan taageerin maal galiyayaasha cilmi baarista iyo siyaasad dejiyayaasha hadii aysan soo bandhigin maamulida bulshada”, kahor inta aysan is weydaarin aragtiyaha kaladuwan waxa ay noqon karto.
Bayaanka Straw-man 1: Heerka baaritaanka hubinta tifaftirka iyo / ama dib u eegista asaxaab ee ay ahayd in diyaarad lasoo maray waa in si cad loogula socodsiiyaa halka laga galayo qoraalka.
In kasta oo aan guud ahaan oggolaanay in jeegareynta tifaftirka iyo dib-u-eegis kasta lagu sameeyo jadwalka diyaarinta waa in si cad loo wada socodsiiyaa, waxaan si dhaqso leh u gaarnay inaan haysanno aragtiyo kaladuwan oo ah waxa daah furnaan macnihiisu yahay. Waa muhiim inaan tixgalinno baahiyaha akhristayaasha iyo waaya'aragnimada: cilmi-baaraha si caadi ah u baarayaa wuxuu u baahan karaa kaliya inuu ogaado heerka baaritaanka uu horay u maray (ma jiro? Baaritaan horudhac ah si loogu hoggaansamo shuruudaha anshaxa iyo sharciga iyo cilmiga ah) Tijaabooyin? Qaar ka mid ah dib u eegista asxaabta ee qoto dheer?), halka cilmi-baaraha qoto dheer u qoddo mowduucaas cilmi baarista ama qaabku u heli karo faallooyinka dib-u-fiirinta iyo taariikhda taariikhdu u fiican tahay. Macluumaadka qaar, sida dib u milicsiga, waa in si cad loogula socodsiiyaa dhammaan akhristayaasha. Si loo adeegsado soosaarid wax ku ool ah, waxay sidoo kale muhiim u noqon doontaa in macluumaadka ku saabsan jeegaga iyo dib-u-fiirinta si habsami leh loo qabto iyadoo la adeegsanayo hab-qeexan oo lagu heshiiyey metadata. Laakiin sidee xogta noocan oo kale ah looga qaban karaa guud ahaan qeybaha kala duwan ee loo qaybiyay? Dib-u-eegista asxaabta iyo habaynta tifaftirka maalmahan si aad ah ayey ugu kala duwan yihiin joornaalada iyo kuwa loo adeegsado daabacaada, ilaa heer intee la eg ayaan si karti leh u qaabayn karnaa howlahaan?
Qoraalka Straw-man 2: Waa inay had iyo jeer xor u ahaataa qoraa inuu soo dhejiyo qoraalka.
Waxaan si wada jir ah u oggolaanay in diyaarintu inay xor ahaato meesha loo isticmaalayo.
Qoraalka Straw-man 3: Ka hortagista looma isticmaali karo in lagu muujiyo mudnaanta daahfurka.
Sida ugu habboon, muhiimadda helitaanku wax macno ah ma leh, laakiin waxaan aqoonsannay in, jawiga cilmi-baarista ee hadda jirta, in arrintan wax laga qaban karo. Marka daabacaadda daabacaadda lagu muujiyo qaybta dadweynaha, mudnaanta sayniska ee shaqada lagu qeexay bogga hore ayaa la aasaasayaa. Waxaan aqoonsan nahay in aaladaha sharci ee hadda jira aysan u dhaqmi karin si la mid ah tan: tusaale ahaan, sharciga patentka Mareykanka ayaa weli dejiya mudnaanta ku saleysan xaraynta arjiga patent, iyo wixii kashifaad dowladeed ah - iyadoo loo adeegsanayo diyaarinta kulanka ama kulanka aan rasmiga aheyn - waa ay wiiqi kartaa tan. Tixgelin dheeraad ah iyo caddeyn ayaa loo baahan yahay sida dhejiska waraaqaha daabacan ay ula fal galaan sheegashooyinka mudnaanta leh iyo waxa ay tani uga dhigan tahay helitaan iyo hanti aqooneed.
Bayaanka Straw-nin 4: Adeegsadayaasha hore diyaarintu waa inay ahaadaan kuwo aan loo dulqaadan karin aaladda iyo howsha kor iyo hoosba.
Si loogu isticmaalo u diyaargarowga awooddooda buuxda, waxaan u maleyneynaa in adeegayaasha diyaarinta ay noqon karaan kuwo la jaan qaada oo la falgali kara qalabka kor iyo hoosba, softiweer iyo shuraako, isla mar ahaantaana aan dan u aheyn macluumaadka ama tilmaamayaasha ku saabsan dhaqamada soo ifbaxaya, heerarka bulshada iyo wixii la mid ah. Tusaale ahaan, hannaanka kor-u-qaadista ee loo adeegsado laguna saxayo metadata waa mid muhiim u noqon kara daahfurka. Adeegsadayaasha u diyaar garowga bulshada ayaa waliba kaala talin kara qaababka ugu wanaagsan ee qulqulka qulqulka biyaha, oo ku daraya qiimaha shaqada iyo fududeynta dib u adeegsiga iyo tabaruca dheeraad ah.
Bayaanka Straw-man 5: Adeegbixiyaasha diyaarka u ah waa inaysan taageerin maal galiyayaasha cilmi baarista iyo siyaasad dejiyayaasha hadii aysan soo bandhigin maamulka bulshada.
Maxaan uga jeednaa maamullada bulshada maxayse tani muhiim u tahay?
Waxaan ka wada hadalnay in ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa riixitaanka kaabayaasha bulshada ay horseed u tahay in la yareeyo fursadaha danaha ganacsi ee mudnaanta la siinayo ka faa'iideysiga sayniska, sida ay ku dhacday luminta lahaanshaha iyo marin u helida qoraallada asaasiga ah ee la falanqeeyay (wadajirka) faa'iido u lahaanta daabacaadayaasha ganacsiga. Halkan, waxaan ku weydiin karnaa: maslaxada ganacsiga ayaa mudnaanta la siiyaa iyada oo loo dan leeyahay ujeedada wadaagida aqoonta iyo fududeynta hadalka, iyo sidee ayaan u hubin karnaa inaysan arintu aheyn mid loogu talagay server-yada?
Ka sakow darawalada ganacsiga, waxaan aqoonsan nahay in bixiyayaasha adeega / kaabayaasha (daabacayaasha, teknolojiyadda) ay sameynayaan hanaan iyo xulasho qaabeyn ah oo saameyn ku leh dhaqanka isticmaalaha. Tan looma qaadin dhaleeceyn - taa baddalkeed, qaar badan oo naga mid ah ayaa isku raacay in dabeecadda cilmi-baarayaashu shaqsiyaad inta badan lagu hago baahiyahooda shakhsi ahaaneed ee degdegga ah oo aan ahayn faa'iido wadareed, taas oo ay ugu wacan tahay culeyska iyo caqabadaha deegaanka ay ka dhex shaqeynayaan. Dadka ka shaqeeya ururada daabacaada waxay xirfadaha iyo aqoonta u keenaan soo gudbinta sayniska ee dhammaystirka tifaftirayaasha tacliinta, dib u eegista iyo qorayaasha. Su'aashu waxay tahay sida loo hubiyo nidaamka iyo xulashada naqshadeynta inay la jaanqaadi doonaan waxa inta badan si dhaqso ah ugu gudbi doona deeqda-waxbarasho.
Waxaan ka wada hadalnay sida uusan hal daneeye kaliya u matali karin danaha ugu wanaagsan ee sayniska, mana jiro aragti keliya oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo gaaro. Kobcinta koritaanka kumbuyuutar qaas u ah bulshada oo dhan waa wax lagu farxo? Mise go’aamada oo dhan waa in lagu gaaraa danaha wadajirka? Waa kuwee waxyaabaha aan tixgelin siinayno, oo sidee baan ku garan karnaa cidda aan aaminsanahay? Sidee geeddi-socod go'aan qaadashada koox kasta lagula xisaabtami karaa gebi ahaanba? Waxaan weydiinay su’aalahan fahan la wadaago oo ah in joornaallo badan ay u shaqeeyaan sidii iskaashi dhexmara xubnaha bulshada aqoonyahannada iyo shaqaalaha daabacaadda, iyo in qaar ka mid ah serveryada diyaarinta (sida bioRxiv) loo adeegsado isla khadadka. Si kastaba ha noqotee, haddii iyo sida tani u shaqeyso maahan mid hufan, iyo daah furnaan la'aanta ayaa laga yaabaa inay tahay udub dhexaadka marka ay timaado aaminaadda in go'aamada ay yihiin danta wadajirka ah. Ka tegida go'aanka cidda aad ku aaminayso deeq-bixiyeyaasha ama siyaasad-dejiyeyaashu ma muujinayaan waxa bulshada ballaadhan rabto, sidoo kale.
Marka, sidee go'aan looga gaari karaa serverka diyaarinta qaab bulshada bulshada ballaaran ay ku kalsoonaan karto? Waxaan eegnay tusaalayaasha kale ee maamulka bulshada ee bulshada hogaamiya - haddii taasi tahay bulshada oo fikir ka dhiibata go'aanada ama awood u leh inay go'aan ka gaaraan go'aan-qaadayaasha iyaga, gaar ahaan dhexdhexaadinta go'aan kasta oo saameyn ku leh danaha ganacsiga. Hal farsamo waa in lagu socodsiiyaa codsi furan ee faallooyinka (RFC; tusaale ahaan, fiiri) https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment) si qofkasta uu u soo bandhigo wax soo saar. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo baahan yahay in la helo hannaan hufan oo caddaalad ah oo lagu go'aamiyo cidda wax ka qabashadeeda lagu dhaqmayo, iyo in la aqoonsado in habraacyadaani aysan dammaanad ka qaadaynin natiijooyinka ka wanaagsan. Haddii kale, mashaariicdu waxay adeegsan karaan isku-darka qaabab si ay u dhagaystaan ​​daneeyayaasha kaladuwan: tusaale ahaan, kooxda ka dambeysa Yurub PMC dhagtayaasha adeegsada iyada oo loo marayo cilmi-baarista badeecada, aqoonyahannada iyada oo loo marayo guddiga latalinta sayniska, iyo kuwa dejiyayaasha iyagoo adeegsanaya isbahaysi maalgeliya. Habkaan dambe wuxuu bixin karaa habka go'aan qaadashada adkeyn kara, oo aan si sahal ah u dirin hal saamile (sida qof kasta oo matalaya qeybta hoose ee ganacsiga), laakiin wuxuu noqon karaa mid qaali ah marka loo eego ilaha maareynta.
Dabeecadda isticmaalaha waxaa saameyn ku leh go'aannada bulshada iyo tikniyoolajiyada ee lagu sameeyo heerka kaabayaasha, sidaa daraadeed sida loo isticmaalo maamuleha shirkad diyaaradeed, iyo cidda, ayaa gacan ka geysan doonta aragtidooda ku aaddan diyaarinta bayoolaji ugu dambeyntii ka ciyaari doona run ahaantii. The wadahadalka ayaa kusii socday khadka tooska ah casho kadib
Miyaynu abuuri karnaa aragti la wadaago oo ku saabsan diyaarinta bayoolajiga?
Khibradaheena, qaybaha aqoonta iyo qiyamka dhamaanteen waxay saameyn kuyeelayaan waxa aan qof walba u aragno inuu yahay mid aan sii ahaaneyno oo aan noqono: laga bilaabo caawinta natiijooyinka in lala wadaago hab waqti ku haboon, iyo carqaladeyso shirkada daabacaada ganacsiga ee hada.
Miiska Emmy wuxuu ka hadlay sida jahwareerka ku saabsan waxa ka mid ah bilowga (iyo waxa aan aheyn) ay u abuureyso dhibaatooyin marka la horumarinayo aaladaha, siyaasadaha iyo kaabayaasha iyaga. Iyadoo la adeegsanayo kiisas kala duwan oo loogu talagalay diyaarinta, iyo halka ay jaaliyaduhu u baahan karaan inay wadaagaan natiijooyin cilmi baaris oo horey loo soo saaray, waxaa la soo jeediyay in ciribtirka qeexitaanka diyaarado "qoraallada diyaar u ah daabacaadda joornaalka" ay gacan ka geysan karto fududeynta horumarka teknolojiyada, isgaarsiinta iyo shaqada u doodista. Adeegsadayaasha diyaarinta ayaa markaa lahaan doona ujeedka kaliya ee guryeynta iyo u adeegida u diyaarinta waxyaabaha diyaarinta ah. Tan waxaa laga yaabaa inaysan qabsan dhammaan kiisaska loo isticmaalo diyaarinta, laakiin waxaa loo arkay inay muhiim u tahay isugeynta korsashada waqtigan xaadirka ah. Si kastaba ha noqotee, miiska Nimco, waxaan soo jeedinay inay faa'iido u leedahay in si hufan loo muujiyo arrimaha murugsan iyo / ama himilada la dheereeyay ee isbedelka, si looga hortago in horumarka la joojiyo mar haddii la qaatay qeexintan la fududeeyay.
Muhiimad ahaan, waxaan ka wada hadalnay walaacyadayada ku saabsan u-diyaarinta, mararka qaar annagoo fiirinayna xaalado aanan dooneynin inaan aragno qaab dhismeed:
Saadaalinadu marwalba xor kuma noqon karto in la dhajiyo ama la akhriyo, iyadoo kuxiran moodooyinka maaliyadeed ee loo adeegsado joogteynta kharashaadka kaabayaasha diyaarinta - waxaa jiray eray digniin ah oo kusaabsan sida dhaq dhaqaaqa marinka u furan ee Mareykanka iyo Yurub uu hada usameynayo isticmaalka maqaal. khariidaynta kicinta (APCs) si loogu bixiyo bixitaanka furan. Tani waxay noqon kartaa sida loo diyaariyo waraaqaha haddii aan la helin ikhtiyaarro kale, sida taageerada tooska ah ee maal-galiyayaasha iyo hay'adaha (tusaale ahaan, maktabadaha).
Iyada oo la diyaarin karo qoraallo si cad loo diyaarin karo, ka waran haddii si khaldan loo fahmo ama loo fahmo Maxaa dhacaya haddii sayniska khaldan loo faafo sida "warar been abuur ah"? Waxaan ka wada hadalnay sida kooxaha bukaanka qaar ay u awoodaan in ay dhaleeceeyaan suugaanta iyada oo aan la helin aqoonta sayniska rasmiga ah iyo in dib u eegista asaaga ahu aysan dammaanad ka qaadin in la saxayo. U bandhigista akhristayaasha daah-furnaan ballaaran iyo macluumaad ku saabsan haddii iyo sida shaqada ay dib u eegeen khuburo kale ayaa waxtar leh.
Saadaasha ayaa laga yaabaa inaysan carqaladeynin deeqda waxbarasho - waxaan sii wadan karnaa ka shaqeynta aduun aan si heer sare, furfurnaan, helitaan sinnaan ah waxsoosaarka iyo isticmaalka aqoonta aan loogu fiicneyn. Tan waxaa lagu arki karaa maanta iyadoo la adeegsanayo diyaarinta si loo sheegto mudnaanta daahfurka iyada oo aan lagu darin helitaanka macluumaadka hoose, iyo dib u qaadashada daabicinta joornaalka isku dhafan ee hore halkaasoo qorayaashu ku muujin karaan inay ka gudbeen marxaladda kala-sooca joornaalada magacyada sharafta leh. .
Aaladaha daabacayaasha ayaa laga yaabaa inay abuuraan quful, sida qorayaashu ugu dhejiso jadwalka bogga oo markaa waxaa la faray inay ku sii jiraan kanaalka dib-u-fiirinta asxaabta.
Waxaan si kooban uga wada hadalnay adeegsiga kheyraadka furan si loo abuuro faa iido: miyaa diyaar garowga ubaahanida kahortaga dhiig-miirashada ganacsiga iyadoo la adeegsanayo qodobada ruqsad siinta, sida wadaaga (-SA)? Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn: faa iidada laga helo ilaha furan laga yaabo inaysan wax dhibaato ah dhicin, illaa inta bulshada ay isku raacsan tahay in faa'iidooyinka furfuristu ay ka sii dheereeyaan wixii dhiig-miirasho ah, sida hadda loo arko inay tahay arrinta Wikipedia.
Marka maxaan dooneynay inaan aragno waxa dhaca? Waxaan ku soo gabagabeyney wadaagida aragtideena gaar u ah isu diyaarinta, oo ay ku jiraan:
Meesha ugu weyn ee lagu faafiyo cilmi-baarista, si ku-meel-gaar ah, taas oo xor u ah qorayaasha iyo akhristayaasha, iyo ka dib marka dib-u-fiirinta asaxaabta ay ka soo baxdo. Dib-u-fiirinta facani waxay noqon kartaa mid abaabulan bulshada; waxay noqon kartaa mid aad u hufan oo waqti ku habboon marka tan loo baahdo, tusaale ahaan waqtiga cudurrada faafa. Xaqiijinta iyo ansaxinta waraaqda daabacday way is beddali kartaa waqti ka dib, iyo sameynta ayaa u saamaxeysaa taariikhda oo dhan in la wareysto.
Diiwaanka hufan ee hadallada sayniska ah ee illaha loogu talagalay barashada la aqbalay iyo / ama ku-camal-falka xirfadaha, gudniinka (tusaale ahaan, hab xisaabeed ku habboon oo lagu dabaqo jaangooyooyin tijaabo ah) ama si ballaadhan (tusaale ahaan, sida loo noqdo wax wax dhis ah faallooyinka asaaga ah iyo qoraa mas'uul ah).
Caawinta dhakhsaha iyo horumarka hore ee dawada, gaar ahaan adduunyada halkaas oo bukaanku noloshooda ku wanaajiyeen iyagoo jabsanaya tikniyoolajiyadda caafimaad (tusaale #WeAreNotWaiting) ama tusida cadeyntooda (yaasha) cadeynta suugaanta.
Gaari ay cilmi-baarayaashu ku xiriirin karaan oo ay la shaqeyn karaan dhagaystayaasha kale (bukaanka, sharci-dejiyayaasha), oo ay bartaan sida tan loo sameeyo.
Qaabka loo adeegsado jiilka aqoonta iyo u adeegsiga si caddaalad ah oo loo wada dhan yahay, tusaale ahaan iyada oo la kordhinayo aragtida cilmi-baarayaasha adduunka oo dhan (sida AfricanArXiv iyo kuwa kaleba waxay u sameynayaan cilmi-baareyaasha ka socda ama ka socda Afrika).
Gaari loogu talagalay khudbadda aqoon-yahan ee aan ku qasbin ka-qeybgalka shirarka shaqsiyadeed ee shirarka, yareynta isticmaalka safarka diyaaradda iyo ka fogaanshaha ka-goynta sabab u ah kharashyada, arrimaha fiisaha iyo arrimo kale oo ka-reebitaan.
Si horay loogu socdo, soojeedinta ayaa ahayd in lagu daro codad kala geddisan doodda, in la bixiyo hoggaan fikir dheeri ah, in la sameeyo himilo wada-jir ah oo ku saabsan mustaqbalka diyaarinta, la diyaariyo tilmaamaha ku-habboon ee waxqabadka milkiilayaasha diyaarinta, iyo in la siiyo isticmaaleyaasha macluumaad ku filan iyo caddeyn laga caawiyo sidii ay u dooran lahaayeen (iyada oo loo marayo ficil) mustaqbalka ay jecel yihiin inay arkaan.
Waa maxay mustaqbalka aad rabto inaad aragto? Waxaan kugu casuumeynaa inaad arintan kala hadasho asxaabtaada oo aad uga tagto faallo nooca asalka ah ee qoraalkan.
Categories:	Furan FuranDiyaargarowPublishing
ScienceOpen iyo AfricArXiv waxay iska kaashanayaan inay siiyaan cilmi baarayaal Afrikaan ah muuqaal xawaare ku socda, isku xirnaan iyo fursado iskaashi. Qalabka cilmi baarista iyo daabacaadda ScienceOpen wuxuu bixiyaa adeegyo iyo muuqaalo laxiriira daabacayaasha, machadyada iyo baarayaasha si isku mid ah, oo ay kujirto nuxurka Akhri wax dheeraad ah…